Dhirta adduunka ee tamarta korontada ku shaqeeya | Cusbooneysiinta Cagaaran
Dhirta super hydroelectric-ka adduunka
Tomas Bigordà | | tamarta Haydarooliga, Tamarta Korontada
Awoodda tamarta laga dhaliyo dhirta korontada waa isha ugu horreysa ee laga cusboonaysiin karo adduunka. Xilligan korontada lagu rakibay ayaa ka badatay 1.000 GW iyo wax soo saarkii sanadkii 2014 wuxuu gaadhay 1.437 TWh, taas oo u dhiganta 14% wax soo saarka korontada aduunka sida ku cad xogta wakaalada caalamiga tamarta (IEA)
Intaa waxaa sii dheer, sida ku xusan saadaasha isla hay'adda, tamarta korantada ayaa sii wadi doonta inay ku kobocdo heer muhiim ah illaa ay ka labanlaabeyso awoodda ay hadda leedahay iyo ka badan 2.000 GW oo ah koronto la rakibay sannadka 2050.
1 Awoodda koronto dhalinta
2 Xarunta tamarta korantada ee Saddexda Gole
3 Warshadda tamarta korontada ee Itaipu
4 Xiluodu saldhig koronto koronto
5 Xarunta tamarta korontada ee Guri.
6 Warshad tamarta korantada ee Tucuruí
Awoodda koronto dhalinta
Awoodda korontadu waxay leedahay faa iidooyin badan inta badan ilaha kale ee korantada, oo ay kujirto heer sare oo lagu kalsoonaan karo, tiknoolajiyad la xaqiijiyay iyo waxtarka sare, kharashka hawlgalka iyo dayactirka ugu hooseeya.
Hydropower waa isha ugu weyn ee la cusbooneysiin karo, maadaama ay seddex jibaaranto tan dabaysha, taas oo, iyadoo leh 350 GW, ay tahay isha labaad. Ku darsiga tiknoolajiyadan sanadihii la soo dhaafay waxay soo saareen koronto ka badan inta kale tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Awoodda horumarineed ee tikniyoolajiyaddani waa mid aad u weyn, gaar ahaan Afrika, Aasiya iyo Latin Amerika. Qorshe hawleedka IEA wuxuu saadaalinayaa in awoodda adduunka lagu rakibay ay laba jibbaarmi doonto ku dhowaad 2.000 GW marka la gaaro 2050, iyadoo soosaarka korantada adduunka uu dhaafayo 7.000 TWh
Kobaca jiilka korantada koronto ayaa asal ahaan ka imaan doona mashaariic waaweyn xagga dhaqaalaha soo koraya iyo kuwa soo koraya. Wadamadan, mashaariicda korontada ee waaweyn iyo kuwa yar yarba waxay hagaajin karaan helitaanka adeegyada tamarta korontada, waxayna yareyn karaan faqriga meelo badan oo meeraha ka mid ah, halkaas oo korontada iyo biyaha la cabo aysan gaarin.
Tamarta korantada, oo laga helo isticmaalka tamarta firfircoonida iyo suurtagalnimada socodka iyo biyo-dhaca, waa mid ka mid ah ilaha da'da ee dib loo cusboonaysiin karo meerahana u adeegsado inuu tamar ku helo. Shiinaha maanta waa dalka ugu soo saarka badan tamarta korontada, waxaa ku soo xiga Brazil, Canada, Mareykanka iyo Ruushka oo ah waddamada leh dhirta ugu muhiimsan adduunka.
Marka xigta waxaan arki doonnaa 5ta ugu sareysa ee dhirta korantada
Xarunta tamarta korantada ee Saddexda Gole
Dhirtaas korontada laga dhaliyo waxay leeyihiin awood rakibtay 22.500 MW. Waxay ku taal Yichang, gobolka Hubei, waana tan ugu weyn adduunka. Waa xarun kayd biyood koronto caadi ah oo adeegsata biyaha wabiga Yangtze.
Dhismaha mashruuca wuxuu u baahday maalgashi dhan 18.000 milyan oo yuuro. Dhismahan weyn wuxuu bilaabmay 1993 wuxuuna dhamaaday 2012. Biyo xireenka ayaa leh 181 mitir sare iyo 2.335 mitir oo dherer ah, waxaa lagu fuliyay qayb ka mid ah mashruuca Saddexda Gorgor, oo ay weheliso warshad koronto dhalisa oo ka kooban 32 marawaxadood oo midkiiba yahay 700 MW, iyo laba unug oo dhalinaya 50 MW. Waqtigan xaadirka ah, soosaarka tamarta sanadlaha ah ee warshadda ayaa iminka dhigay rikoodhka adduunka ee 2014 oo leh 98,8 TWh, oo awood u siinaya in korantada la siiyo sagaal gobol iyo laba magaalo, oo ay ku jirto Shanghai.
Warshadda tamarta korontada ee Itaipu
Warshadaha tamarta korontada ee Itaipu, oo ay ku rakiban tahay awood dhan 14.000 MW, waa tan labaad ee adduunka ugu weyn. Xaruntu waxay ku taal wabiga Paraná, xadka u dhexeeya Brazil iyo Paraguay. Maalgashiga lagu sameeyay dhismaha warshadan ayaa ahaa 15.000 milyan oo yuuro. Shaqooyinku waxay bilaabmeen 1975 waxaana la dhammeeyey 1982. Injineerada injineerada daladda IECO fadhigiisu yahay Mareykanka iyo ELC Koronto oo saldhigiisu ahaa dalka Taliyaaniga, ayaa fulisay dhismaha, iyadoo laga bilaabay wax soo saar koronto oo laga soo saaray warshadda bishii Meey 1984.
Warshadda tamarta korontada ee Itaipu waxay siisaa ilaa 17,3% isticmaalka tamarta ee Brazil iyo 72,5% tamarta lagu cuno Paraguay. Gaar ahaan, waxay ka kooban tahay 20 unug oo wax-soo-saar leh oo awood u leh midkiiba 700 MW.
Xiluodu saldhig koronto koronto
Xaruntan korantada korontada waxay ku taalaa wadada wabiga Jinsha, waa qeyb ka mid ah wabiga Yangtze qaybtiisa sare, waxay ku taal bartamaha gobolka Sichuan, waa xarunta labaad ee ugu weyn ee Shiinaha iyo tan seddexaad ee ugu weyn adduunka. . Awoodda rakibtay ee warshadu waxay gaadhay 13.860 MW dhammaadkii 2014 markii la rakibay labadii jiil ee jiilka ugu dambeeyay. Mashruuca waxaa soo saaray Shirkadda Saddex Gorges waxaana la filayaa inay soo saarto 64 TWh oo koronto sanadkii ah markay si buuxda u shaqeyso.
Mashruucu wuxuu u baahan yahay maalgashi 5.500 million euro dhismuhuna wuxuu bilaabmay sanadkii 2005, wuxuu bilaabmay marawaxadihii ugu horeeyey bishii julay 2013. Warshadu waxay ka kooban tahay biyo xireen qalooca dhererkiisu yahay 285,5 mitir oo dherer ah iyo 700 mitir oo balac ah, iyadoo la abuurayo barkad leh awood kaydkeedu dhan yahay 12.670 milyan oo mitir cubic Qalabka xarunta, oo ay soo bandhigeen injineerada Voith, wuxuu ka kooban yahay 18 matoorro matoorro mashiinno ah oo leh tamar dhan 770 MW midkiiba iyo matoor-qaboojiye hawo leh oo leh 855,6 MVA wax soo saar.
Xarunta tamarta korontada ee Guri.
Warshad Guri, oo sidoo kale loo yaqaan 'Simón Bolívar hydroelectric plant', ayaa loo qoondeeyay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka, iyadoo leh awoodda la rakibay ee 10.235 MW. Xarumaha waxay ku yaalliin webiga Caroní, oo ku yaal koonfur-bari Venezuela.
Dhismaha mashruucu wuxuu bilaabmay 1963 waxaana lagu fuliyay laba waji, kii ugu horeeyay waxaa la dhamaystiray 1978 kii labaadna 1986. Warshadu waxay leedahay 20 unug oo dhaliya awoodo kala duwan oo u dhexeeya 130 MW ilaa 770 MW. Shirkadda Alstom waxaa lagu xushay laba qandaraas 2007 iyo 2009 dayactirka afar 400 MW iyo shan 630 MW unug, Andritz sidoo kale waxay heshay qandaraas ay ku siineyso shan 770MW Francis turbines 2007. Ka dib dayactirka qalabka jiilka, warshadu waxay heshay koronto saad ka badan 12.900 GW / saacaddii.
Warshad tamarta korantada ee Tucuruí
Biyo xireenkaani wuxuu ku yaalaa qeybta hoose ee Tocantins River, oo ku taal Tucuruí, oo ay leedahay Gobolka Pará ee dalka Brazil, waxaa lagu magacaabaa inuu yahay warshadda shanaad ee ugu weyn adduunka ee koronto dhalisa oo leh 8.370 MW. Ku dhismaha mashruuca, oo u baahday maalgashi dhan 4.000 milyan oo yuuro, waxaa la bilaabay 1975 iyadoo wajigiisii ​​koowaad la dhameystiray 1984, oo ka kooban biyo xireenka culeyska culeyska oo dhererkiisu yahay 78 mitir iyo 12.500 mitir oo dherer ah, 12 soo saaraya unugyo awood u leh midkiiba 330MW. unugyada caawinta ee 25 MW.
Marxaladda labaad waxay soo kordhisay wershad koronto oo cusub oo la bilaabay 1998 lana dhammaystiray dhammaadkii 2010, taas oo lagu rakibay 11 qaybood oo jiil ah oo midkiiba qaadi karo 370 MW Injineerada dalada ay aasaaseen Alstom, GE Hydro, Inepar-Fem iyo Odebrecht la keenay
qalabka wajigan. Xilligan, warshaddu waxay siisaa koronto magaalada Belém iyo nawaaxigeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » tamarta Haydarooliga » Dhirta super hydroelectric-ka adduunka
Kaliya 7,7% tamarta lagu cuno jasiiradaha Canary waxay ka timaadaa dib u cusboonaysiinta
Qashinka dabiiciga ah ee loogu talo galay jikada